£5အခမဲ့ကွိုဆိုအပိုဆု၏စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ
ဒီမြှင့်တင်ရေးအသက်ကြီးတရားဝင်အကောင့်သစ်ကိုင်ဆောင်သူမှသာရရှိနိုင် 18 သို့မဟုတ်ထိုထက်ပို.
ဒါဟာအထိကြာနိုင်ပါတယ် 10 အသိအမှတ်ပြုခံရဖို့ဆုကြေးငွေများအတွက်မိနစ်.
အပိုဆုတရားဝင်သည် 28 အကြွေးဝယ်ပြီးနောက်ရက်ပတ်လုံး. ဤအချိန်ပြီးနောက်, ဆုကြေးငွေတရားဝင်ဖြစ်ငြိမ်းလိမ့်မည်နှင့်ကျန်ရှိသောရန်ပုံငွေများကိုသင့်အကောင့်မှဖယ်ရှားပစ်မည်.
ဤကမ်းလှမ်းချက် 2nd ဇန္နဝါရီလကနေရရှိနိုင် 2015 နောက်ထပ်အသိပေးစာသည်အထိ.
ဒီဆုကြေးငွေတစ် 100x အာမခံလိုအပ်ချက်သယ်ဆောင်. အဆိုပါ£5အနည်းဆုံး wagered ရဦးမည် 100 တစ်ဆုတ်ခွာမီကကြိမ်လုပ်နိုင်ပါတယ်. ဒါကြောင့်သင်အာမခံရန်လိုအပ်ပါတယ် 100 x က£5= £ 500 သင်သည်သင်၏ဆုကြေးငွေထုတ်ယူနိုင်ခင်.
ဒီဆုကြေးငွေမှအများဆုံးအနိုင်ရရှိ£ 20 မိနစ်မှာပါလိမ့်မည်. ဒီ£ 20 သာအများဆုံးသင့်ရဲ့ရုပ်သိမ်းရေးချိန်ခွင်လျှာမှဆက်ပြောသည်လိမ့်မည်ဟုဆိုလိုသည်. အောင်မြင်သောအာမခံပေါ်မှာငွေပမာဏအတိုင်းထက်အလွန်မဆိုကျန်ရှိသောလက်ကျန်ငွေ voided လိမ့်မည်.
ဒီဆုကြေးငွေကိုသာကျွန်တော်တို့ရဲ့ slot ကဂိမ်းမဆိုပေါ်မှာကစားရန်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်.
နိမ့်ဆုံးဆုတ်ခွာ£ 10. ကစားသမားတစ်ဦးခိုင်လုံသောငွေပေးချေကတ်ကို register ရမယ်, ထုတ်ယူ၏ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်.